FAA'IIDOOYINKA IYO WAXYEELOOYINKA XAYAWAANKA, SIFOOYINKA DAAWOOYINKA IYO KA HORTAGGA ISTICMAALKA - GEEDKA ORCHARD
Lul - mid ka mid ah midhaha ugu caansan ee carruurta iyo dadka waaweyn. Ka sokow xaqiiqda ah in macmacaan badan oo jecel yihiin waxaa laga sameeyey, midhaha sidoo kale leedahay guryaha badan oo bogsiinaya. Dumarkuna ma lumiyo hantidooda wax daaweyn ah.
Dabool: qiimaha nafaqada, fiitamiinada iyo macdanta
Digaaga ayaa si sax ah loogu tixgeliyaa badeecad cunto, qiimaha nafaqadu wuxuu qiyaastii 30 kcal halkii 100 g. Waxaa intaa dheer, baalal-qulatadu waa kaliya kaydka fiitamiinada: waxa ku jira fiitamiinada A, C, PP, E, B1, B2, B6 iyo R. Waxa kaliya ee ay kiimikada iyo xeryahooda waxtar u lahayn tubta! Waxa ku jira kiimikada dabiiciga ah, macdanta iyo citric, astaamaha cuntada iyo fructose. Miraha waxaa ku jira fiber, pectin iyo antioxidants. Sidoo kale, miraha waxay hodan ku yihiin waxyaabo ay ka mid yihiin iodine, zinc, fluorine, calcium, manganese, chromium, copper, fosfooraska. Iyo content of potassium halkii 100 g ee wax soo saarka waa 215 mg.
Ma taqaanaa? Jacaylka Ingiriisiga ah ee rucubada waxaa lagu qeexay xaqiiqda ah in ereyga "tubta" uu ku jiro magacyo badan oo ka mid ah xarumo kala duwan, tusaale ahaan, bara loo yaqaan "Wild Plum" (Daar Beer) ee Edinburgh ama bar "Yellow Plum" (Yellow Plum) ee London, taas oo aan booqday Winston Churchill hal mar.
Waa maxay faa'iidada faa'iido leh
Plum wuxuu faa'iidooyinka ugu badan ka helayaa xaqiiqda ah in uurjiifku yahay calool jilciye tayo leh. Si tartiib ah ayay u caawineysaa in la xakameeyo mindhicirada, iyada oo aan wax khasaare ah u keenin bukaanka. Xitaa waxaa lagu talinayaa dhakhaatiirta dadka qaba xiidmaha mindhicirka iyo dhibka caloosha. Isticmaalka joogtada ah ee plomme ayaa si weyn u yareynaya heerarka dhiigga ee dhiigga.
Maxay yihiin faa'iidooyinka caleemaha tubta?
Caleemaha boodhka sidoo kale waxay leeyihiin waxyaabo faa'iido leh, oo laga yaabo in ay ka soo horjeeda keliya ay tahay dulqaad shakhsi ah ee maaddooyinka. Qaybta ugu weyn ee halabuurka ee caleemaha midhaha waa gumarins. Maadooyinkan waxay leeyihiin saameyn jilicsan: waxay dareerayaan dhiig ka sii dareen, derbiyada xididdada dhiigga waxayna si weyn u yareynayaan xaaladda cudurka qanjirada iyo gout, sida kalluunka. Sidoo kale, iyada oo gacan ka helitaanka infusions of caleemaha bovaha, nabarrada bogsashada iyo nabarrada boogaha, thanks to guarins isku mid ah.
Qodobbada waxtarka leh ee miraha
Ka feker waxa ay faa'iido u tahay miro baaluq ee jirkeena. Xajmiga, dabcan, waxay faa'iido u leeyihiin dadka miisaankoodu sarreeyo oo ay leeyihiin dhibaatooyin dheef-shiid kiimikaad, oo doonaya in ay lumiyaan miisaanka, sababtoo ah waxay leeyihiin saameyn ku timaadda oo ay ku fiicnaanayaan in laga saaro milixda xad-dhaafka ah iyo kolestaroolka jirka oo si fudud u nuugo jirka. Wax kasta oo kale, baaluq ayaa sidoo kale u shaqeeya sida calool jilciye, ka qaadista sunta iyo jeexjeexyada jidhka. Plum waa waxtar u leh dadka qaba hurgunka, waa faa'iido leh in loo isticmaalo laabotooyinka. Xajka leh saameyn sahlan ayaa fududaynaysa xaaladda bukaanka leh ciriiri ku jirta gallbladder, oo kordhinaysa dheecaanka dheecaanka.
Waa muhiim! Potassium wuxuu ka caawiyaa murqaha in uu helo niyad-jebin kara kicinta. Sidaa darteed, isticmaalka miro-cawinta iyo dhaqdhaqaaqa wadnaha.
Qalabka dawooyinka ee plomme, sida loo isticmaalo sidii warshad miro dhagax ah ee daawada dadweynaha
Su'aasha ah in tubaakadu ay daciif tahay ama la xoojiyay ayaa muddo dheer laga baaraandegay daawada dhaqanka. Inta badan, waa dhirta iyo takhaatiirta kuwaas oo ku talinaya in lagu xalliyo dhibaatooyinka dheef-shiid kiimikaad iyo dhibaatooyinka mindhicirka mindhicirka iyadoo la adeegsanayo plomme. Casiirka leh buufin ayaa si weyn u hagaajineysa isdhexgalka mindhicirka, ka sokow waa keydka fitamiino badan, oo ay ku jiraan fitamiin C, lagama maarmaan u ah ka hortagga caabuqyada fayraska. Inta badan, daawada dhaqameedku waxay ku talineysaa in ay isticmaasho plomme dadka qaba dhibaatooyinka kelyaha: plom waa cusbo fiican. Xaalado badan, isticmaalka ka hortagga malabka waxaa loo isticmaalaa in lagu yareeyo calaamadaha xun ee cudurrada maqaarka ama dhaawacyada maqaarka.
Qodobada faa'iidada leh ee tubta iyo fitamiin C ee ka kooban waxay noo ogolaanaysaa in aan tixgelinno tallaabo ka hortag ah oo ka dhan ah hargabka, iyo sidoo kale wakiilka antipyretic wanaagsan. Khudradda dalooshada leh qashirku waa mid waxtarka leh oo loo yaqaan 'giardiasis' (cudur keena duleelada mindhicirka yar). Daawo dhaqameed ayaa kugula talineysa in la cabbo cabitaanka shaaha. Cabitaanka noocan ahi wuxuu caadi u yahay hurdada wuxuuna dejiyaa xasaasiyadaha.
Xiiso leh Markii ugu horeysay, rajo ayaa ku timid Ruushka iyadoo la mahadinayo Tsar Alexei Mikhailovich 1654. Geedka kowaad wuxuu ku koray beerta boqornimada, halkaasna waxaa ku faafay barxadaha Ruushka, inkasta oo ay heshay caanaha ugu badan ee beerashada tubta ee qarnigii 18aad.
Guryaha daawooyinka ee plomme waxaa lagu qiimeeyaa kondomka casriga ah. Waxyaallaha miraha ah waxaa loo adeegsadaa sidii dib-u-nooleyn, cusbooneysiin iyo wakiil jidheed oo nafaqo leh. Macdanta ku jirta xayawaanku waxay xoojisaa oo ay dib u soo celisaa timaha iyo ciddiyaha, iftiinka iyo jilicsanaanta ayaa lagu daraa timo jilicsan. Beta-carotene waxay isku qabataa barar hore, waxay ka hortagtaa luminta kolajka, taasoo lagama maarmaan u ah ilaalinta maqaarka dhalinyarada. Saxarka ayaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo kiriimyada, maaskarada, looska iyo sheyga. Iyo walxaha qiimaha leh waxa ku jira lafo iyo lafo dabacsan! Halabuurka saliidda tubta waxaa ka mid ah palmitoleic, stearic, oleic, linoleic, eicosanoic acid. Intaa waxaa dheer, waa hodan ku ah iodine iyo sitosterol. Joogitaanka antioxidants iyo asiidh dufan, fitamiin E iyo macdanta ayaa jilicsan oo jilicsan maqaarka aan dhab ahayn, halka si sahlan loo nuugo. Copper, birta, calcium, magnesium, zinc, fosfooraska ayaa ku jira dhagaxyada tubta loo isticmaalo wax soo saarka waraaqaha, kaas oo u oggolaanaya inaanu kaliya nadiifin maqaarka, laakiin sidoo kale inuu cuno.
Sida loo isticmaalo daboolka wax lagu kariyo
Digaaggu waa mid caan ku ah karinta. Of midhaha for xilliga qaboobaha la goosto, macaanka, macaanka, marmalade iyo marshmallow, compotes iyo casiir. Boorashka cusub waxaa loo isticmaalaa sida buuxinta for pies iyo pies, impregnations waxaa loo diyaariyey keega iyo muffins. Waxyaalla badan oo macaan leh ayaa laga diyaariyaa malax: barkadaha, mullahyada, jelly, nacnaca dufanka, baradhada la shiiday iyo miraha candied ah. Qajiradu waxay sameeyaan suugo wanaagsan oo hilibka iyo digaaga, soosaarista suxuunta ugu muhiimsan, digirta cusub waxay si fiican u soo baxdaa saladhaha miraha iyo qudaarta.
Guntu waa la qalajiyey, la qalajiyey, la kariyay, la qaboojiyey oo qoyan. Warshadaha khamrigu maaha kuwo aan lahayn daloolin: vodka, khamriga, liishooyinka, tinctures iyo wax badan oo kale. Maxaa keenaya miro mid gaar ah qiimo leh oo dhan in dhogorta ay u wanaagsan tahay jirka oo aan ka lumin ka dib markii daaweynta kulaylka ee midhaha ama qalajinta, qalajinta. Sida kiknoolajiyada, saliida baalalka ah waxaa loo isticmaalaa xoogga iyo ugu weyn ee karinta: dhadhanka yaryar ee qurxinta leh iyo qurxinta quruxda badan ayaa ku heley qosol ku jira macmacaanka macmacaanka, keega iyo pies.
Qulqulo: waxyeelo iyo iska horimaad
Sida shey kasta oo kale, plomme, marka lagu daro guryaha waxtar leh, waxay leeyihiin khilaaf. Guntu waa gebi ahaanba ka horjeeda shubanka. Ku xiran tiro badan oo ah dadka qaba diabeteska daran. Waa wax aan loo baahnayn in la cabbo turjuudaha cabitaanka tubta. Laguma talinayo in la siiyo baradho la shiiday ama casiir leh qashir lagu sameeyo carruurta ka yar hal sano. Dadka qaba acidite sare ee caloosha waa in ay cunaan plom ee tiro yar. Dhageyso dareenkaaga waa inuu xasaasiyad leeyahay.
Digniin! Xubnaha dheef-shiidka ee carruurtu ma awoodaan inay dhirtaan tubta, taas oo keeni doonta cadho iyo xanuunka mindhicirka iyo caloosha.
Lul - faa'iido leh iyo fitamiin miro ah, haddii aad u cuntid qadar macquul ah - waxaad jidhkaaga ku dhali doontaa fiitamiin, iyo macdan, iyo tamarta lagama maarmaanka ah.